चालककै लापरबाहीले बढ्दैछ दुर्घटना – Sthaniya Patra
चालककै लापरबाहीले बढ्दैछ दुर्घटना
By स्थानीय पत्र On Dec 9, 2020
२४ मङ्सिर, काठमाडौँ। भक्तपुरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा.८च ४७५६ नम्बरको कार आइतबार राति कौशलटारमा दुर्घटनामा प¥यो । दुुर्घटनामा कारमा सवार एक युवतीको मृत्युभयो ।
दुुर्घटना भएको केही समयपछि प्रहरीको सम्पर्कमा आएका कार चालक सञ्जित कार्की र अन्य दुुई जना घाइतेको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरीले तीव्र गतिसँगै सडकमा आएको गाईको बाच्छी जोगाउन खोज्दा सो दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
त्यस्तै प्यूठानबाट बिरामी बोकेर काठमाडौँ आउँदै गरेको लुु.१च ९७३१ नम्बरको भ्यान ११ गते चितवनको इच्छा–मनकामना नजिक सडकबाट त्रिशूूली नदीमा खस्यो । त्यसमा सवार मुकुन्द रोक्का पौडिएर बाँच्न सफल भए पनि उहाँकी बिरामी श्रीमती जमुना, छोरी जिनिशासहित चालक सूूर्य केसीले ज्यान गुमाउनुभयो ।
प्यूठानदेखि काठमाडौँ सम्मको लामो यात्रासँगै बिहानीपख चालक निदाएका कारण उक्त दुर्घटना भएको निचोड प्रहरीले निकाल्यो । उल्लेखित यी दुुई सवारी दुर्घटनामा चालककै कमजोरी देखाइएको छ । तीव्र गति र चालक निदाएकै कारण यी दुर्घटना भएको दाबी प्रहरीको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटनामा चालकको लापरबाही तथा कमजोरी औँल्याएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले चालकले ट्राफिक नियम पूर्ण पालना गरी सवारी चलाउने हो भने ९० प्रतिशत दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले प्राविधिक कमजोरी भए पनि चालक सचेत हुनैपर्छ, सडक र सवारी साधनलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन भन्नुुभयो । ट्राफिक प्रहरीको अध्ययनले पनि दुर्घटनामा चालकलाई मुख्य दोषी र त्यसपछि अन्य कारण उल्लेख गरेको छ ।
औसत १५ दुर्घटना
मुलुकभर औसत दैनिक १५ वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । ती दुर्घटनामा परी दैनिक दुुई जनाले अकालमै ज्यान गुमाउने गर्छन् । राज्यले सवारी दुर्घटनालाई सामान्य रूपमा लिए पनि यसबाट हुने धनजनको क्षति कहाली लाग्दो छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सवारी दुर्घटना सम्बन्धी अध्ययन नै नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले चालकलाई मात्र दोष थुपार्ने काम चर्चाका लागि मात्र हो । हवाई दुर्घटनामा जस्तो समिति नै गठन गरी सवारी दुर्घटनाको छानबिन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन भन्नुुभयो ।
दुर्घटना बढ्नुमा चालकलाई मुख्य दोषी देख्नुभन्दा चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ । चालकको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सडकको अवस्था, चौपाय, हुस्सु कुहिरो, खाल्डाखुल्डी र यात्रु हामी सबैको कमजोरी उहाँले देखाउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार सवारी दुर्घटनामा दैनिक २४ वटा सवारी साधनको संलग्नता देखिने गरेको छ । त्यसमध्ये बस, मिनी बस र माइक्रोबस दुर्घटनाको सङ्ख्या मोटरसाइकलपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ । उहाँले क्षति बेहोर्नुपर्दाको पीडा पीडित परिवार र व्यवसायीलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्नुभयो ।
दुुर्घटना नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको यातायात व्यवसायी औँल्याउँछन् । सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणदेखि सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण, सवारी परीक्षण, स्थलगत अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।
दुर्घटना झनै बढ्दो
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म तीन वर्षको सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा प्रत्येक वर्ष दुर्घटना बढ्दै गएको पाइएको छ । आ.व. ०७५/७६ मा १३ हजार ३६६ दुर्घटनामा दुई हजार ७८९ को मृत्यु र चार हजार ३७६ जना घाइते भएका थिए । आ.व. ०७६/७७ मा १५ हजार ५५४ दुर्घटना हुँदा दुई हजार २५५ को मृत्यु, चार हजार ६१७ जना घाइते र २५ हजार सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिना अवधिमा पाँच हजार ६०४ वटा दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा ६५५ को मृत्यु, एक हजार ९९९ जना घाइते, आठ हजार ८१७ सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । उक्त तथ्याङ्कबाट प्रस्ट हुन्छ, प्रत्येक वर्ष सवारी दुर्घटना बढ्दो गतिमा छ । यातायात व्यवस्था विभागले भने सडक विस्तार र सवारी चापका कारण दुर्घटना बढेको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले राज्य स्तरबाट स्पष्ट रणनीति, अध्ययन अनुसन्धान तथा चालकलाई प्रशिक्षण छैन । सडक र सवारीका विषयमा ऐन कानुन छन्, प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन भन्नुभयो ।
आज कुकुर तिहार मनाइँदै,
बाल्मिकी मावि पूर्नबासमा बिदाई तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम…
मनसुन फेरि सक्रिय, सोमबारबाट तीन दिनसम्म झरी हुने
अनलाइन गेम बिङ्गो खेलेको आरोपमा बौद्धबाट १६ जना पक्राउ
के शत्रुता? के मित्रता? मुस्कानले धेरै कुरा टर्छ